Egypta: Abu Tarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2018 1:48 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 28 Janoary 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tahaka ny mahazatra, tsy tara amin'ny fanasongadinana ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny fiarahamonina Egyptiana i Zeinobia. Androany izy dia nitodika tany amin'ny fanatanjahantena ary nanoratra mikasika ny lalao Egyptiana tao amin'ny fiadiana ny Amboara Afrikana tany Ghana 2008 izay nifanandrinany tamin'i Sodana. Tsy miresaka momba ny fandresen'i Egypta an'i Sodana tamin'ny isa 3-0 akory ny lahatsorany, fa momba an'i Abu Tarika, tanora mpilalao baolina kitra ao amin'ny Ekipa Ahli, izay saika nahazo ny fon'ny ankamaroan'ny Egyptiana na manohana ny ekipa io na tsia!
Manazava i Zeinobia :
Abu Tarika, ilay mpilalao baolina kitra ankafizinay no nahafaty baolina roa, rehefa avy nahafaty ny baolina voalohany izy dia nasehony ny akanjony anatiny izay nisy soratra vitsivitsy tao anatiny, ka nahazoany karatra mavo izany
Fa inona ireo teny ireo ??
Miraisa hina amin'i Gaza
Tsy vao voalohany izao no nanaovan'i Abu Tarika izany, tao amin'ny Fiadiana ny Amboara Afrika tany Kairo tamin'ny taona 2006 nandritra ny krizin'ny Sariitatra Danoà malaza ratsy dia nahataitra antsika rehetra i Abu Tarika rehefa nanao akanjo anatiny misy soratra izay midika hoe isika rehetra ho an'ny Mpaminany Mohammed “PBUH” izy
Tsy momba ny maha-mpivavaka azy na tsia anefa izany fa momba ny fomba hanehoany ny fomba fijeriny. Tsy ho afaka hanao izany intsony izy, fa farafaharatsiny anefa mba tafitany ny hafatra manan-danja tiany hambara tamin'ireo tranga roa ireo izy.